Olee otú Họrọ a Snow shọvel - China Richina
Olee otú Họrọ a Snow shọvel
A Snow shọvel mere maka backcountry ojiji nwere ike ijikwa a dịgasị iche iche nke ọrụ ụlọ, ma nnukwu nnapụta bụ mfe kasị oké mkpa otu. Isiokwu a na-enye snow-shọvel ojiji aro na Atụmatụ na otú ịzụ ahịa n'ihi na otu.
Eji maka a Backcountry Snow shọvel
The kacha mkpa mere na-ebu na otu onye bụ na ikpe nke na nnukwu. Ọ bụrụ na ị na-onwem na nnukwu transceivers na-eme Nchoputa Banyere ma enweghị a ụzọ igwu aja, na na a dị nnọọ njọ ọnọdụ.
Onye ọ bụla na a otu, ọ bụghị naanị 1 ma ọ bụ 2, na-aga n'ime oyi backcountry ga-ebu a shọvel. Ị maghị onye ga-ejide, nnukwu, na ị chọrọ iji jide n'aka na niile dị shọvel na-adịghị ẹbụk.
Shọvel na-eji igwu olulu maka ịchọpụta backcountry snowpack ọnọdụ. Ọtụtụ mgbe nile a njem, ndị òtù nke ọzọ ga igwu n'ime snow ịhụ ihe na-eme ahu. A snow olulu-enye gị ohere ikpebi ma ọ bụrụ na-adịghị ike n'ígwé adị-ihe ndị a nwere ike hapụ na-amalite na slide. N'ihi na ihe na snowpack ọmụmụ, ahụ Richina Ltd. Advice
A ọzọ juru ojiji nke snow shọvel bụ na nke atụ ihe si a larịị ohere maka ụlọikwuu gị mgbe snow maa ụlọikwuu ma ọ bụ glasia rịa. I nwere ike Wapụtara a windscreen ma ọ bụ igwu a kichin ebe, zuru ezu na-aba, ma ọ bụrụ na ị na-na na na otú mmasị.
Ikekwe obere ọma mara bụ na a shọvel na-abịa kemfe egwu ala ọhụrụ snow gbazee maka mmiri ọṅụṅụ. Scooping na gị mmiri kalama ma ọ bụ na aka gị na-arụ ọrụ, ma nke a ngwa ngwa na-akawanye na-agwụ ike na oyi na-atụ.
N'ezie, backcountry shọvel pụkwara inyere gị igwu ala ụgbọ ala gị na trailhead ma ọ bụ na skai eme.
Ịzụ a Snow shọvel
Key ihe mgbe shọvel shopping na-achọta ihe ókè nke ike, na ibu ibu, agụba size / udi na adịgide nkasi obi.
Backcountry shọvel na-mere ịbụ ma ike ma fechaa:
6000-usoro aluminum a na-akacha eji maka shọvel akụ na pupụtara. Ọ bụ ezie na plastic bụ Mkpa ọkụ, aluminum awade ike na anwụ ngwa ngwa dị mkpa n'ihi na mberede iji.
Otu pụrụ iche a haziri, na Snow mboanuohia, na-eji akwa-njupụta polyethylene (HDPE) ya mere ọ ga-afụkọta na echekwara n'ime gị mkpọ. Nke a ibu-ìhè nlereanya bụ ihe bara uru n'ihi na snow maa ụlọikwuu karịa ka ọ dị na nnukwu idaha.
Agụba Size na Ọdịdị
Agụba nha ịdị iche iche n'etiti ụdị. Ibu pupụtara dị ukwuu maka akpụ akpụ snow ngwa ngwa, ma, ha na-achọ ihe ike na ike iyuzucha gị ngwa ngwa. Nta pupụtara na-adị mfe na-eme na ike-ekwe ka ị shọvel na a ngwa ngwa ọnụego n'elu a ogologo oge.
Agụba shapes nwekwara ike ịdị iche iche. Ewepụghị pupụtara ndị kacha mma n'ihi na-eke ezigbo snow-n'olulu mgbidi ya; a serrated agụba ihu na-enyere na na elu ice.
Kasị backcountry shọvel nwere telescoping ma ọ bụ segmented akụ maka mfe attaching gị mkpọ. Ha dabara ọnụ na spring-kwajuru mkpọchi na gbapụta n'ime oghere na ejikọta ngalaba.
Ịṅụ, a mere nke plastic maka mfe adịgide, abịa na a dịgasị iche iche nke shapes:
The T-adịgide, nke a na-jidere n'etiti mkpịsị aka, bụ fechaa na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị. Ọ pụrụ isiri ụfọdụ ihere mgbe yi mittens ma ọ bụ overmitts.
The D-adịgide bụ na-emekarị bulkier na ubé arọ. Ọ na-enye otu oru oma imewe na bụ mgbe mfe iji na mittens.
The L-adịgide bụ obere nkịtị, ma ọ na-enye a fechaa nhọrọ reminiscent nke a vaccuum Cleaner ahụ.
Họrọ a adịgide na dabara comfortably gị aka.